Vaovao - Fitaovana amin'ny harona plastika
Kitapo sakafo plastika
Kitapo vata fampangatsiahana plastika
Kitapo mitantana Vest plastika
Kitapo fako voaisy tombo-kase fisaka
Kitapo fako misy fofona manitra plastika
Vokatra azo ariana plastika
Fonon-tanana azo ampiasaina
Fitaovana amin'ny harona plastika
Afaka manavaka ny fitaovana nyharona plastikas amin'ny maso mitanjaka?
A: Matetika isika dia tsy manana fahaizana manavaka ny fitaovanaharona plastikaamin'ny maso mitanjaka.Amin'ny alalan'ny fandinihana, fikasihan-tanana ary fandoroana ihany no ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra fototra.
Inona avy ireo fitaovana amin'ny harona plastika?
A: Amin'ny ankapobeny mizara ho efatra karazana, ao anatin'izany: PVC,HDPE, PP,LDPE
1, PVC: izany hoe, matetika isika no nampiasa vokatra harona plastika vaovao, fohy ny fotoana may, mahantra flammability, mirehitra afo mitondra maitso;Nandritra ny fotoana ela ao amin`ny ivelany fanehoana, dia hiseho vy loko;Raha miforitra mafy ianao dia hahita marika fotsy.
2, HDPE: mahazatra kokoaharona plastika, mahatsiaro ho toy ny savoka.
3, PP: avo hamafin'ny harona plastika, tsara gloss, fandoroana dia hamokatra fofona labozia mahery.
4, LDPE: harona plastika malefaka, kosohy dia hamokatra rustling feo.
Inona avy ireo harona plastika misy akora samihafa mety hampiasaina?
Valiny: satria tsy mitovy ny fitaovana, dia tsy maintsy mitandrina ny fampiasana azo antoka, mba tsy hamokatra poizina amin'ny vatana vokatry ny voka-dratsy.Ohatra: ny fitaovana PVC dia tsy mafana mihitsy, rehefa mafana dia hamokatra poizina lehibe.Ny PVDC dia tsy azo afangaro amin'ny menaka, rehefa mifangaro sy mafana dia hamoaka zavatra misy poizina sy ny sisa, ka tsy maintsy mampiasa harona plastika araka ny tokony ho izy.
Inona avy ireo olana tokony hojerena amin'ny famolavolana harona plastika amin'ny fitaovana samihafa?
A: Na inona na inona karazana harona plastika, ny poti-plastika dia tsy maintsy tsofina ao anaty sarimihetsika plastika mba handrosoana bebe kokoa.Araka ny fitaovana amin'ny harona plastika, sarimihetsika mitsoka milina dia tokony ho voafantina ara-drariny, ary avy eo ny fanontana dia mizara ho offset fanontam-pirinty sy varahina fanontam-pirinty.Ny fomba fanontam-pirinty mety dia azo voafantina araka ny toe-javatra manokana!Ny dingana farany dia ny fanaovana kitapo.
Fotoana fandefasana: Dec-14-2021
Fiaran-dalamby Outer Ring, Tanànan'i Yucheng,